!!! #MNHRC #ကိုအောင်နိုင်(ခ) #ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ) #ကိုပါကြီး #သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုထုတ်ပြန်ချက | democracy for burma
tags: ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူ သေဆုံးကြောင်း, စုစုပေါင်း (၄၇)ဦး, ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ, ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရ, Burma, KILLED REPORTER, KKO, Klohhtoobor Karen Organization, Ko Par Gyi, MNHRC, Mon State, MPC, Myanmar, Thailand
(ဎ) ဦးခေါင်းဦးရေပြားအောက်သွေးခြေဥခြင်းမရှိပါ။ ဦးခွံရိုးတစ်ခုလုံးနှင့်လည်ပင်းရိုး မကျိုးပါ၊ လည်ဇလုပ်ရိုး မကျိုးပါ။
← !! For #Norwegian #King #Harald V and #Queen #Sonja, #Myanmar #authorities #tear #down the #huts by bulldozer
!! #malaysia #မေလးရွား #လူသတ္မူ႔ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ ႏွစ္ဦး #ထပ္မံ ဖမ္းဆီး →